११ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि काठमाडौको यो क्षेत्र सिल – NepalajaMedia
११ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि काठमाडौको यो क्षेत्र सिल
August 8, 2020 1038
काठमाडौं । काठमाडौंमा सिल गरिएको क्षेत्रमा हाँडिगाउँ पनि थपिएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौंको हाडिगाउ पनि सिल गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको हाँडीगाउँ क्षेत्रको एउटै टोलमा ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ मा पर्ने हाँडीगाउँको कोटाल टोलमा ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले एक साताअघि पाँच जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि शुक्रबार सोही टोलका ३३ जनाको स्वाब संकलन गरि परिक्षण गरिएको जानकारी दिए । शुक्रवार र शनिवार ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । अहिले सो क्षेत्र सिल गरेर आवागमन रोकिएको छ ।
संक्रमित हुनेमा नेपाल प्रहरी, प्रहरीका परिवार र उनकै छरछिमेकी रहेको वडाध्यक्षले बताएका छन् । पहिलो पटक एक प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनको परिवारकै अन्य चार सदस्यको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। तत्कालका लागि उक्त क्षेत्र सिल गरेको र आइतबार सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि संलग्न कोभिड–१९ समिति बैठकले थप निर्णय गर्ने अध्यक्ष डंगोलले जानकारी दिए।
Prevमेयर सहित एकै दिन ५२ जनामा कोरोना पुष्टि
Nextकाठमाडौं उपत्यकामा ६२ संक्रमित थपिए, उपत्यकामा संक्रमितको संख्या १ हजार नाघ्यो
छोरी मृत्युको मुखमा, आमा परपुरुषको काखमा, प्रमाण सहित बाउ छोरी रुदै मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
भ्या’स्लिनमा केवल यो २ चिज मि’साएर कपालमा ल’गाउनुहोस्, हप्तामै दे’ख्नुहुनेछ चमत्का’र
कार्टुनमा भेटिएकी बच्चाको भयो न्वारन, आमालाई न्वारनको दिन रासन देखी भाले सम्म उपहार (भिडियो)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12389)
आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. (10360)
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ? (8796)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (8053)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7139)